Misaotra anao manokana sy tsapa fo | Martech Zone
Misaotra anao manokana sy tsapa fo
Alahady, Desambra 24, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vanim-potoana tsy mampino ho an'ny asako an-tserasera ity. Androany ny bilaogiko dia voatonona roa John Chow ary Seth Godin's bilaogy Ary vao tsy ela akory izay ny lohahevitra iray amin'ny fidirana bilaogy tena mendri-piderana ao amin'ny bilaogin'i Pat Coyle! Ny herinandro lasa teo, Mike ao Converstations dia feno fahasoavana nanonona ahy ho "Z-lister". Ny fampiroboroboany ahy tsy misy fitiavan-tena dia nahatonga ny bilaogiko holazaina amin'ny olona 70 mahery, ao anatin'izany ny fiantsoana androany ao amin'ny bilaogin'i Seth Godin.
Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay dia niditra tampoka ny bilaogiko fifamoivoizana ary amin'ny fahefana.
Ireo fitomboana rehetra ireo dia tsy avy amin'ny fahaizako manokana. Avy amin'ny filan-dratsiko ny fakana sy fanaparitahana vaovao ary ny fizarana ny ny fahalalana sy fahaizana. Tiako ny misaotra anao tsirairay avy. Raha ny tena izy, raha misy dia ataoko amin'ny taona ho avy miaraka amin'ny asa dia iray amin'izany no tanjoko. Ampahafantaro anao ny alehako, ary hihaona hisotro na hisotro kafe izahay. Raha ho tonga any Indy ianao dia aza misalasala mampahafantatra ahy.
Indraindray mandany be loatra ny androko ny bilaogy, saingy toa mandeha daholo izay ataonao sy ianao:
Miezaka manome lohahevitra iray tany am-boalohany aho tamin'ny ankamaroan'ny fidirako. Amin'izany fomba izany ny bilaogiko dia tsy ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra na famerimberenana fotsiny ny vaovao fa ilay resaka no resahina. Asa sarotra izany fa mamaly.
Isaky ny mahita referansa ny bilaogiko amin'ny tranokala na bilaogy hafa aho, dia manandrana mamaly sy misaotra an'io olona io - na dia tsy tsara aza ny lahatsoratr'izy ireo (indrindra raha tsy izany). Ny sanda dia ao anaty fifanakalozan-kevitra. Tsy marina (ok, mahalana) foana aho, na ahoana na ahoana.
Mandray anjara amin'ny hetsika fanaovana bilaogy vondrona aho. RAHA Problogger Tsy tafiditra ao anatin'ny fanaovanao bilaogy isan'andro, fa ataovy izany. Matetika i Darren dia mihaika ny tontolon'ny bilaogy amin'ny tetikasan'ny vondrona. Izy rehetra dia samy mahazo ny sain'ny be sy ny saina.
Mizara zavatra nianarako aho.
Miezaka manampy izay mangataka aho. Mahatonga ahy hanana olana matetika izany, saingy io no tokony homeko. Io no 'ahy', raha sitrakao.
Mampifandray lohahevitra amin'ireo bilaogera hafa aho. Raha mahita lohahevitra ifanakalozan-kevitra iray izay manam-pahaizana ny iray amin'ireo bilaogera novakiako dia manandrana mampifandray azy roa hatrany aho. Inona ny tamba-jotra raha toa ka tsy manampy amin'ny fifandraisana ianao?
Manohy mampiroborobo ny bilaogiko ho ahy ianao.
Mipetraka ao amin'ny Starbuck aho izao. Raha ny marina dia somary kivy aho androany fa tsy miaraka amin'ny zanako anio hariva na rahampitso. Mandany Krismasy mahafinaritra miaraka amin'ny renin'izy ireo sy ny ankohonany. Rehefa nanoratra aho dia nahazo fanavaozana mailaka avy amin'ny namako, Glenn, izay manao asa fitoriana any Mozambika ary nahatonga ahy hahatsapa fahafinaretana be loatra ka tokony hisaorako azy.
Nampahatsiahy ahy izany fa ny hafa dia mahafoy zavatra betsaka mandritra ity fialantsasatra ity. Tsy mahafoy tena tokoa aho… mipetraka miaraka amin'ny Peppermint Mocha ao amin'ny trano fisakafoanana misy kafe. ny Berrymans nitondra ny fianakaviany manontolo hanao iraka tany Mozambika mba hanampy amin'ny fampianarana sy hanaparitaka ny teny tsara. Azonao an-tsaina ve? Tena manaja ireo manome betsaka aho.
Ary tadidiko ny tafikay. Tany ivelany aho nandritra ny 9 volana nandritra ny Desert Shield / Desert Storm ary nandany Krismasy nitsingevana tao amin'ny Golfa Persiana. Mampihetsi-po tokoa ny fialana mandritra ny vanim-potoana iray izay matetika mitambatra fianakaviana. Andriamanitra anie hitahy ny tafika sy ny ankohonany ary ireo fianakaviana very be.
Misaotra antsika rehetra! Tena nataonao fety tsy mampino ho ahy ity.
Geotagged ve ny tranokalanao, bilaoginao, na ny sakafonao?
Sakafo atoandro krisimasy
Dec 25, 2006 amin'ny 12: 08 AM
Arahabaina amin'ny asa mafy rehetra naloa. Mahafinaritra ahy ny mamaky ny blôginao, na dia tsy manome hevitra isan-kerinandro aza aho. Mirary fety sambatra ary tohizo ny asa mafy.